ATLETA : Afaka mitondra avo ny voninahi-pirenena ireo manana fahasembanana
Omaly 3 desambra 2019 no nosokafana tamin’ny fomba ofisialy tao amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina ny andiany faha18 amin’ny lalao ara-panatanjahantena ho an’ireo atleta manana fahasembanana eto amin’ny Ranomasimbe Indianina (Coupe des Clubs Champions Handisports de l’Océan Indien na CCCHOI). 16 janvier 2020
Haharitra dimy andro ity hetsika ity ary tsy hifarana raha tsy amin’ny 8 desambra 2019. Nosy miisa efatra no mandray anjara amin’ izany, izay ahitana an’i La Réunion, Maurice, Comores ary Madagasikara. Efatra kosa ny taranja ifaninanana : Basket-Ball, Tsipy Kanetibe, Tenisy ary ny Boccia. Nankahery sy nanohana ny Atleta Malagasy nifaninana ny teo anivon’ny Minisiteran’ny tanora sy fanatanjahan-tena ary tonga teny an-toerana nisolo tena ny Minisitra ny Tale Jeneralin’ny Fanatanjahan-tena, Ramatoa Rosa Rakotozafy niaraka tamin’ny delegasiona eo anivon’ny Minisitera.
Nanamafy ny teo anivon’ny Minisitera fa vonona izy ireo hifanome tanana amin’ny federasiona mba hanatratrarana ny tanjona iraisana dia ny fanandratana ny hambom-pom-pirenena amin’ny alalan’ny fanatanjahan-tena araka ny Velirano nataon’Andriamatoa Filoham-pirenena.
Mandray anjara amin’ny fanatanterahana ny velirano
Mandray anjara mivantana amin’ny fanatanterahana ny velirano ny mpanao fanatanjahan-tena manana fahasembanana eto Madagasikara satria anisany manandratra avo ny voninahi-pirenena any amin’ireo fifaninanana iraisam-pirenena isan-karazany raha tsy hiteny afa-tsy ny lalao ny Nosy farany teo, izay nahazoantsika medaly volamena 2, volafotsy 5, alimo 5. Tafiditra tamin’ny lalao famaranana teo amin’ny taranja hazakazaka tany amin’ny lalao “Paralympiques” ; medaly Volafotsy 2 sy Varahina 2 nandritra ny lalao iraisam-pirenena tany Abudabi farany teo. Tsiahivina koa fa efa nandrombaka ny medaly Volamena isika teo amin’ny taranja Basket-Ball "fauteuil roulante".
Tsy mbola misitraka ny zony feno…
Na eo aza nefa ny fanohanan’ny avy eo anivon’ny minisiteran’ny tanora sy ny fanatanjahan-tena, nanipika ireo mpilalao manana fahasembanana fa tsy mbola misitraka ny zony feno izy ireo ary mbola iharan’ny fanilikilihan’ny fiarahamonina. Tsarain’ny mpiara-belona ho enta-mavesatra sy mpangataka lava izy ireo rehefa mitaraina na milaza ny olany.
“Matetika adino ireo atleta manana fahasembanana ireo, tsy raharahian’ny olona izy ireo satria ny sembana amin’ny ankapobeny dia heverin’ny olona ho olona mpangataka foana. Iaraha-mahita nefa fa tsy mikely soroka amin’ny fampandrosoana ny fanatanjahan-tena eto Madagasikara izy ireo. Mendrika fanohanana izany, ary tokony homena fanampiana mihoatra lavitra noho ny olona mirijarija sy matanjaka afaka mitady fanampiana ho an’ny tenany aza”, hoy Patrice Raoul, filoham-boninahitry ny kaomity mitantana ny atleta manana fahasembanana.